အင်္ဂါရပ် - WPSOLR နှင့်အတူအတုထောက်လှမ်းရေး
ပင်မစာမျက်နှာ » အင်္ဂါရပ် - အတုထောက်လှမ်းရေး
WooCommerce စတိုးဆိုင်ကြီးများတွင်ရှာဖွေရေး filter များအနေဖြင့်မရရှိနိုင်သည့်အချက်အလက်များစွာပါ ၀ င်သည်။
သင့်မှာ static attribute တွေရှိပြီးသားပါ dynamic attribute တွေ? ဖြစ်နိုင် Attributes သင်၏ဖော်ပြချက်များ၊ ရုပ်ပုံများသို့မဟုတ်ဗွီဒီယိုများမှထုတ်ယူထားသည်.
စံ AI သည်အဖွဲ့အစည်းများကိုစစ်ဆေးနိုင်သည် (ပုဂ္ဂိုလ်များ၊ တည်နေရာများ၊ မြို့များ၊ နိုင်ငံများ၊ ရက်စွဲများ၊ အဖြစ်အပျက်များ) ။ ဒါပေမယ့်သင်လည်းလုပ်နိုင်တယ် ရထားမော်ဒယ်များ သင့်ရဲ့ detect လုပ်ဖို့ ကိုယ်ပိုင်စီးပွားရေးသဘောတရားများ.
နည်းပညာဆိုင်ရာ wizard ဖြစ်ရန်မလိုအပ်ပါ။ သင်၏ API ပံ့ပိုးသူကိုပလပ်အင်အတွင်း၌သာရွေးပါ၊ ပြီးနောက်သင့်အတွက်အရာအားလုံးလုပ်ဆောင်လိမ့်မည်။ သင်၏စာသားများမှဒေတာထုတ်ယူခြင်းနှင့်ရှာဖွေရေးစစ်ထုတ်ကိရိယာများတွင်ပြောင်းလဲခြင်း။
စမ်းသပ်ပြီးနှင့်ထောက်ခံ API များ
စမ်းသပ်ပြီးသားများအနက် API ဝန်ဆောင်မှုကိုရှာပါ။ ၎င်းသည်သင်၏ WordPress သည်သင်ရွေးချယ်ထားသော hosting ကုမ္ပဏီနှင့်ချိတ်ဆက်မှုမရှိစေရန်ချိတ်ဆက်ပေးလိမ့်မည်.
သင့်ရဲ့ AI တိုင်ပင်ဆွေးနွေးစာအုပ်ဆိုင်
သင်၏သဘာဝဘာသာစကား (NLP) API ပံ့ပိုးသူများနှင့်တွေ့ဆုံပါ။
အမေဇုံ Rekognition API ကို
Qwam စာသား Analytics မှ